Anyị na-enyocha PLA 3D850 na 3D870 nke onye nrụpụta Spanish Sakata3D | Akụrụngwa n'efu
Ndị na-eme ihe niile na-ahụ ya dị mfe iji bipụta ya PLA filament. Ọ bụ ihe onwunwe anaghị emepụta isi n'oge a na-ebi akwụkwọ, ọ bụ ike ego, ọ bụ ihe okike, enwere agba di iche iche na ahia ma nwekwa ahuhu obere nsogbu nsogbu. Agbanyeghị, maka ụfọdụ ọrụ a kapịrị ọnụ nke anyị kwesịrị iji mepụta akụkụ nwere nnukwu nguzogide mmetụta na okpomọkụ, ihe a adịghị adaba ma ọ dị mkpa ịbanye na plastic ABS.
Ọ dabara nke ọma, ọtụtụ ndị nrụpụta wepụtara filaments na site na usoro nke crystallization nke iberibe na ọkụ na-enweta n'ibu Njirimara ndị yiri nke ABS. N'isiokwu a, anyị ga-enyocha ngwa agha PLA INGEO 850 na 870 site n'aka onye na-emeputa ihe na Spain Sakata3D
Dị ka anyị na-agwa gị na a ihe aga aga American biopolymer emeputa NaturaWorks na-arụ ọrụ nwa oge iji mepụta ihe nwere ihe ndị yiri ya na ABS mana enweghị ụkọ ya. N'ime afọ a niile na nke gara aga ọ mepụtara PLA nke ọ kpọrọ INGEO na njirimara ya bụ isi bụ na enwere ike idobe ya a pụrụ iche crystallization usoro n'ime nke, site na itinye isiokwu ndị e biri ebi ka ha kpoo a na-emezigharị ihe dị n'ime ya site na imezi ihe ya. Enwekwu ike, na-eguzogide mmetụta na-enweta ma iberibe ahụ na-anagide okpomọkụ dị elu karị.
Maka nyocha a, anyị ejirila ngwa nbipute ọzọ ANET A2 gbakwunyere. N'agbanyeghị ịbụ a ala ọgwụgwụ igwe (na ọnụahịa dị n'okpuru 200 if ma ọ bụrụ na anyị si na China zụta ya) ma ghara ị nweta nsonaazụ nke ọkwa zuru oke, ọ zuru oke maka ọtụtụ ihe dị na ahịa. Nwere a abughi ihe omuma ndi oru; Ọ nwere ike ibipụta ihe ruru 100 mm / s, ọ nwere ụdị onye na-ebu ụta, enwere ike iwe ọkụ ọkụ ruo 260 Celsius C, ọ nwere ike ibipụta na mkpebi nke micron 100, ọ nwere isi ọkụ ma nwee nnukwu mbipụta elu (220 * 220 * 270mm).
1 Mwepu nke PLA 3D850 na 3D870 filament si Spain emeputa Sakata3D
2 Nkwubi okwu ikpeazụ
Mwepu nke PLA 3D850 na 3D870 filament si Spain emeputa Sakata3D
Eriri ahụ bịara zuru okè packaged na agụụ juru n'ọnụ, A na-eji eriri dị elu eme ihe mkpuchi ahụ nke na-arụ ọrụ nkwado ma filament winding dị nnọọ mma. Na nlele mbu enweghi ike ihu ya ma n'oge mmetuta anyi nile anyi nwere enweghi nsogbu na nke a. Ihe nwere ezigbo adhesion n'etiti akwa, ọ naghị eweta nsogbu nsogbu. Ihe pigmentation nke ihe a bụ edo na nchapụta nke iberibe ndị ebipụtara na filament ọlaọcha na-enye ya enweghị njedebe. N'ozuzu ya na-aza nke ọma, n'agbanyeghị oke mgbagwoju anya nke akụkụ e biri ebi.
La emeputa website Ọ bụ ikiri ụkwụ Achilles ya, ọ bụghị nke a na-ahụ anya ma nwee atụmatụ dị ka nke mgbe ochie, agbanyeghị na ọ na-arụ ọrụ ya n'ụzọ zuru oke. Anyị nwere ike inweta ihe, ha na-enye anyị ntọala bụ isi iji bipụta ya.
The kpakpando e ji mara nke ihe a bụ na anyị nwere ike n'okpuru ya a crystallization usoro. Maka nke a anyị ga-emerịrị etinye iberibe n'ime ot oven ka a okpomọkụ nke 120º Celsius maka oge ruru nkeji 20. N'ime oge niile anyị lebara anya na iberibe ahụ ma anyị achọpụtala na ọkụ anaghị agbarụ ha mgbe ha nọ n'ime oven, ọ nweghịkwa isi ọ bụla ma ọ bụ anwụrụ ọkụ nke nwere ike ime ka anyị nwee ahụ erughị ala ma ọ bụ ụjọ maka nchekwa n'oge usoro ahụ.
Na ileba anya mbu, iberibe crystallized apụtaghị na agbanweela mgbanwe ọ bụla n'oge usoro ahụ. Otú ọ dị, nyocha nke ọma banyere ha ozugbo ha jụrụ oyi na-ekpughe nke ahụ akụkụ ahụ adịwanye ike ma sie ike karịa ịchụ ụfọdụ mgbanwe ha. Ọ bụ ezie na akwụkwọ ọrụ aka na-egosi na iberibe iberibe ahụ nwere ike ibelata ntakịrị n'oge a na-eme mkpuchi, nsonaazụ ya enweghị isi. Iberibe ihe ndị ahụ dị 15x2x2 cm ma mgbanwe dị iche iche tara ahụhụ rute otu milimita
Anyị ebipụtala mpempe akwụkwọ na nha, na-eme ka o doo anya ime akụkụ na PLA 850 ma ọ bụ 870 Ingeo esighi ike karịa ịme otu akụkụ na ọkwa PLA. Ya mere, ọ bụrụhaala na ọnụahịa ego adịghị eweta nsogbu, ọ ga-adị mma iji PLA Ingeo.
El crystallization usoro dị mfe ma ọ dịghị achọ ka ọ bụla ọkachamara na ngwáSite na ịgwọ iberibe anyị n'ụzọ dị otú a, anyị ga-enwe ike imeziwanye njirimara ọrụ ha. Ma ọ bụ n'ihi na anyị ga-edo onwe ha n'okpuru ọnọdụ ndị na-emebi ma ọ bụ nanị iji jide n'aka na ha ga-anagide oge. Youtube juputara na ndị na-eme ihe na-edo onwe ha n'okpuru mpempe akwụkwọ a na nyocha kachasị mma ị nwere ike iche n'echiche, ọ bụ ihe a na-apụghị ịgbagha agbagha na àgwà nke filament PLA 850 ma ọ bụ 870 Ingeo dị elu karịa ọkwa PLA.
N'ikpeazụ, to the oke mma / ọnụego ruru SAKATA3D filamentsAnyị na-emeso ezigbo ọkachamara na-arụ ọrụ nwere ezigbo ihe dị mma na ọrụ ndị ahịa nwere mkpa. Ekwela ka nzuzu nke websaịtị ha megharịa gị anya, ọ bụrụ na ị jụọ ya na Onye kere obodo ị ga-achọpụta na echiche izugbe kwenyere na nke isiokwu a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » Nkọwa 3D » Anyị na-enyocha PLA 3D850 na 3D870 sitere na onye na-emepụta ihe na Spain bụ Sakata3D
GoPro ga-ewepụ ndị ọrụ 200 na 300 site na nkewa nke drone